Home Wararka Waa Kuma Sheekh Maxamed Idiris?
Waa Kuma Sheekh Maxamed Idiris?
Sheekh Maxamed Idiris Axmed waxaa ku dhashay magaalada Qandala waxaa uu in muddo ahba soo dhex jiirayey culimada Somaliyeed isagoo taagnaa goobkasta oo uu islahaa waxbaa ka karsamaya. Dadka Somaliyeed oo diinta aad ugu nugul waxaa mararkii dambe lagu sirayey garweyn oo la deysto, Qamiis cad iyo Cimaamad oo qofka hadduu gaal faajir soo qaato intaas waxay u qaataan inuu yahay caalim diinta islaamka loogu noqdo. Mana oga dadka badankood in dharkaas uu yahay dhaqan carbeed oo rag badan oo culuumta diinta loogu noqdo aysan qaadaan.
Annaga waxaa uu xoog nagu yeeshay markii ay na soo galeen horraantii todobaatameeyda kooxaha itixaadka la isku yiraahdo, balsa u kala taagan firqooyin is wada dilaya oo halka ugu hooseeya uu yahay Daacish iyo Shabaab oo Xamar cabshuurta laga qaado isku haysta.
Wadaadkan Sheekh Maxamed Idiris-na culimadaas ayuu ka mid ahaa, Itixaad wahaabi ahaa oo aad u adadag ayuu ahaa kadib markii ictisaam loo xuubsiibtayna waa kan qaylida derbi walba la taagan.
Sheekha waxaa ku bannaan oraahdan Somaliyeed ee faqay (faqiih) tolkii kama janna tago.
Muqaalkan hoose waxaa idiin kaga muuqan doona wadaadka dabka saaraya sannadihii uu madaxweynaha ahaa sheekh Shariif iyo xukuumaddii u saldhigtay dawladdaan hadda la haysto. Wadaadka oo si aan naxariis lahayn u weeraray walow ay ahayd xukuumad curdun ah oo wax waliba ay bilow yihiin.
Waxaa ku xigtay dawladdii Xasan Sheekh Maxamud oo dhidibada u aasay hab dowladeedkan hadda jiraa. Sheekh Maxamed Idiris isagoo feeraha is dilaacinaya ayuu xukuumaddaas dagaal xoog leh oo afka ah uu ku qaaday, xataa diinta uu sheeganayo ma xadeyn waxa uu leeyahay iyada ayuu u isticmaalay hub ahaan oo labada dowladoodba ha lagu jihaado ayuu lahaa.
Hasa yeeshee markii dawladdan hadda dalka dhibaatada ku haysaaa ee Farmajo la soo dhisay ilaa caawa oo magaalada Baydhabo ay gurikastaa Itoobiyaan taangi iyo Beebe la hor taagan yihiin, waxaa uu wadaadku wadaa duco iyo ammaan isagoo habaaraya cidkasta oo tilmaanta khaldaaadkeeda tira beelk ah. Sheekhu waxaa uu ku baaqay in Qaaraan loo uruuriyo dawladda Farmajo. Tolow intaas ma qabiil jaceylaa?
Sheekh Dahir Aweys oo alaaba aan ka hadal xaaladaha qabiilka xataa waa gartay in wadaadku ka beensheegay wixii ay isla barteen waxaana isagoo Xabsi guri ku jiraa uu ka soo duubay muuqal uu kaga hadlay isaga iyo culimo kale.
Bal halkaan ka daawo sheekheenna weyn , Sheekh Maxamed Idiris Axmed oo afka labadiisa dhinac ka abuurinaya marka uu ka hadlayo kuwa aan isaga ku qabiilka ahayn ee dalka soo xukumay ee MW Shariif iyo Mw Xasan sheikh. Laakiin markii dawladu sida uu isagu ixtimaalay ay dadkiisu qabteen kana mid noqday waxa ku hadlay cod wanaagsan oo naseexa leh isagoo dadka Somaliyeed shaati diimeed u gashanaya ayuu ku boorriyey in dawladdan lala shaqeeyo, qaaraanna loo ururiyo. Wallee Faqiih tolkiisakama janno tago. Sheekh Maxamed Idiris Axmed na waa kaas.
Previous articleSomaliland Attends Francophone Economic Forum held in Daka
Next articleSaraakiil katirsan Ciidanka Xoogga Dalka oo lagu toogtay Deegaanka Galboole
Uganda oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay Somali wadata walxaha Qarxa